Kedu otu Google Adwords si arụ ọrụ | Martech Zone
Wednesday, November 16, 2011 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Chris Bross
Anyị tinyere nnukwu ozi gbasara etu esi eme ya Ngwa Google Adwords Adrank ọrụ. WordStream ewepụtala infographic a iji gosi gị otu Google Adwords si arụ ọrụ, na-enye nghọta maka ọrụ onye ọrụ ọchụchọ na-eduga na mgbasa ozi ahụ. Google Adwords na-akọwa 97% nke Google $ 32.2 ijeri na mgbasa ozi revenue!
Site na WordStream - a gbaara AdWords mmekọ.
Tags: google adwordsgoogle adwords infographicinfographicakwụ ụgwọ ọchụchọppc